Tag: https | Martech Zone
Wednesday, April 26, 2017 Tọzdee, Eprel 27, 2017 Douglas Karr
Y’oburu n’itinyela ihe omuma ihe nchoputa nke ihe nchọgharị iji gbalie ma lelee onyogho ma obu tinye ihe na echebeghi ya, imara ka odi nkpa. Kechioma nye anyị, enweela mmelite mara mma na Semrush's Site Audit zuru ezu - mgbakwunye nke nyocha HTTPS. Nwere ike ugbu a nyochaa HTTPS dị omimi nke na-ekpuchi pasent 100 nke ndụmọdụ nchedo Google. Gini mere HTTPS ji Dị Mkpa? Na-esi na HTTP gaa HTTPS
Na mmechi, Oge eruola ịla ezumike nka WWW gị
Saịtị dị ka nke anyị anọwo kemgbe afọ iri chịkọbara ọkwa na ibe akwagidewo okporo ụzọ na-enweghị atụ kemgbe ọtụtụ afọ. Dị ka ọ dị na ọtụtụ saịtị, ngalaba anyị bụ www.martech.zone. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, www abụrụla ihe a ma ama na saịtị… mana anyị debere nke anyị n'ihi na subdomain ahụ nwere ikike dị ukwuu na igwe nchọgharị ọchụchọ. Ruo ugbu a! Moz nwere oke mmebi nke mgbanwe na 301 Redirects nke Google kwuwaputara nke na-enyere saịtị ntanetị aka
Afọ ole na ole gara aga, edere m na SEO anwụọla. Aha ahụ dị ntakịrị karịa n'elu, mana m na-eguzo n'akụkụ ọdịnaya ahụ. Google na - enweta ngwa ngwa na ulo oru nke na - egwu egwu egwu egwu egwu ma na - eme ka igwe ihe nchoputa di ala. Ha weputara usoro nke algọridim nke na - emeghi ka o sie ike igbanwe onodu nyocha, ha liri ndi ha huru na eme blackhat SEO. Nke ahụ abụghị